”ရေနွေးကြမ်း သောက်ပြီ ဗိုက်မှာပိုနေတဲ့ အဆီတွေ လျှော့ကြစို့” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ”ရေနွေးကြမ်း သောက်ပြီ ဗိုက်မှာပိုနေတဲ့ အဆီတွေ လျှော့ကြစို့”
”ရေနွေးကြမ်း သောက်ပြီ ဗိုက်မှာပိုနေတဲ့ အဆီတွေ လျှော့ကြစို့”
Posted by ခင်ခ on Oct 25, 2012 in Food, Drink & Recipes, Health & Fitness | 31 comments
ခင်ခရေးတင်လိုက်တဲ့ ကင်ဆာရောဂါ၏ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာများ ပိုစ့်မှာ Mobile ရဲ့ “ ကင်ဆာရောဂါ မဖြစ်ခင်မှာ တစ်ရက် ရေနွေးကြမ်း ၂ လီတာ ပုံမှန်သောက် သုံးပေးပါက ကင်ဆာရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်´´ လို့ ကွန်မန့်ပေးထားတာလေးမှာ ရေနွေးကြမ်း သောက်ခြင်းသည်ကင်ဆာကို ကာကွယ်တဲ့ အကြောင်းလေးပါလို့ ဖတ်ဖူးတဲ့ တိုလီမိုလီစာပေစုထဲက ပြန်ရှာပြီး မျှဝေရေးမိ လိုက်တာပါ။
ရေနွေးကြမ်းမှာ antioxidants တွေပါဝင်တာကြောင့် ၀ိတ်လျှော့တဲ့အခါမှာ အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်။ အဓိကတော့ ဗိုက်မှာ ပိုနေတဲ့ အဆီတွေ လျှော့ကျစေ တာပါပဲ။ ရေနွေးထဲကို လက်ဖက်ခြောက်ခတ်ပြီ ရေနွေးကြမ်းကို ၁နေ့ ၃ခွက် ပုံမှန် သောက်ပေးခြင်းဖြင့် ဗိုက်မှာ ပိုနေတဲ့ အဆီတွေကို လျှော့ချပေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရှေးကတည်းက ရေနွေး ကြမ်းသောက်တဲ့ အလေ့အကျင့်ကို ပြုလုပ်လာကြတာဟာ အကျိုးရှိလို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဗိုက်အဆီတွေကို အမြန်ဆုံး ဖယ်ရှား ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ရေနွေးကြမ်း တနေ့ ၃ခွက်အပြင် ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလေးပါ အပိုဆောင်းပြီ လုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာကလည်း ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အများကြီး အထောက်အကူ ပြုစေပါတယ်။ ထို့ပြင် ရေနွေးကြမ်း သောက်ခြင်းဖြင့် တခြား အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ထိုထဲကမှ အကျိုးကျေးဇူး (၆)ချက် ကို ကောက်နှုတ် ဖော်ပြ ပေးထားတာပါ။
ရေနွေးကြမ်း သောက်ခြင်းဖြင့် ရရှိသည့် အကျိုးကျေးဇူး (၆)ချက်
၂။ သွေးတိုးခြင်းမှ လျှော့ကျနိုင်ခြင်း
၃။ အသားအရေး လှပပြီ အရွယ်တင်စေခြင်း
၄။ ကင်ဆာဖြစ်ခြင်းမှာ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း
၅။ နှလုံးရောဂါဖြစ်ခြင်းမှ လျှော့ကျစေခြင်း
၆။ သွားကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုခြင်း
ဒီလောက်ဆိုရင် ရေနွေးကြမ်း ပုံမှန်သောက်ပေးဖို့အတွက် အများကြီး တိုက်တွန်းဖို့ပင် မလိုတော့ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ သွယ်လျတဲ့ ခန္ဒာကိုယ်ဖြစ်ဖို့ ရေနွေးကြမ်း တနေ့ ၃ခွက် မသောက်နိုင်ရင်တောင် ၁ခွက်လောက် ပုံမှန်သောက်ပေး ရင်တောင် အကျိုးကျေးဇူး အများကြီး ရှိပါတယ်လို့ ဖော်ညွှန်းထားပါတယ်လေ။
( ကင်ဆာရောဂါ၏ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာများပိုစ့်လင့်က – http://myanmargazette.net/153491/health-fitness ပါ။)
ဒို့ရွာက ယောက်ျားဗိုက်ကြီးသည်ဂျီးအတွက် တော်တော်အသုံးဝင်တဲ့ပိုစ့်လေးပါပဲ :harr:
ကိုဘဲဥ ပျော်သွားပုံထောက်ရင်တော့ ယောကျာင်္းဗိုက်ကြီးသည်ထဲ တစ်ယောက်အပါအ၀င်လား သိဘူးတော့…။ ခိ .. ခိ….
ဟဲ့ဟဲ့ စကားပုံတောင်ရှိတေးဒယ် လူ့ကျက်သရေ ဗိုက်မှာနေတဲ့ ၊
အော်အော် .. ဟိုစကားပုံရောသိဘူးလား …
ဗိုက်မှာ အဆီကျ .. ဘီယာသမား ဗျ …
အင်းဒါ ကို ဖတ်ပြီး တစ်ယောက်သော သူတော့ ရေနွေးကြမ်းတွေ သောက်နေလောက်ပြီ ။
ကျွန်တော်လဲ လက်ဖက်ခြောက်တွေ ၀ယ်ပေးရတော့မှာပဲ တိန် လ ကလဲ ကုန်တော့မယ်………
ဦးခင်ခရေ … ကျနော် ထပ်ဖြည့်ပြီး ပြောပါရစေခင်ဗျာ ..
ရေနွေးကြမ်း ခပ်တဲ့အခါ မှိုတက်နေတဲ့ လက်ဖက်ခြောက်တွေ မသုံးပါနဲ့ …
လက်ဖက်ခြောက် အများကြီး ခပ်ပြီး မသောက်ပါနဲ့ ..
(အချို့က လက်ဖက်ခြောက် အများကြီး ခပ်ပြီး ရေနွေးကြမ်း ခပ်ခါးခါးတွေကိုမှ ကြိုက်တတ်တယ်)
ရေကိုလည်း လိုအပ်တဲ့ အတိုင်းအတာထိ ဆူအောင် တည်ပါ …
ဒီပို့စ်ကို ဦးကြောင်ဝတုတ်ကြီး ဖတ်မိပါစေသောဝ် ….။
အမလေး ကိုကိုအံ့ ပိန်းဆေးဖော်တဲ့ ဆေးဆရာတောင် လက်မြှောက်ထားတဲ့ အဲဒီ ဗိုက်ကို ဒီရေနွေးကြမ်းလောက်ကတော့ ဘယ်လောက်သောက်သောက် ကျမယ်မထင်.. ဟိဟိ
ရေနွေးကြမ်း ပုံမှန် နေ့တိုင်း သောက်လို့.. အဘိုးက သေသာ သေသွားတယ် အသက် ၉၆နှစ်.. သွေးထဲမှာ အဆီမရှိဘူး။ ဆရာဝန်က အမြဲချီးမွမ်းတယ်.. စားလိုက်ရင် အဆီတုံးပဲ စားတယ်။ အဆီစားပြီးရင် ပြောနေကျ ပုံပြင်ကတော့ ရှေးရှေးတုန်းက တလုပ်ပြည်မှာ မိထွေးနဲ့ နေရတဲ့ ကောင်လေး ရှိတယ် မိထွေးက အဆီပိတ်ပြီး အမြန်သေစေချင်လို့ အဆီတွေ နဲ့ ထမင်းကျွှေးတယ်။ အဲဒါကို သိတဲ့ ကျောင်းဆရာက ကျောင်းရောက်ရင် ရေနွေးကြမ်း ပူပူ အမြဲ တိုက်တယ်.. အဲလိုနဲ့ ကျောင်းသားလေး ဘွဲ့ရ ပညာတတ်ကြီး ဖြစ်သွားတယ် ဆိုပါတော့.. အဲလို အမြဲ ပြောပြီး ရေနွေးကြမ်း ပဲ လှိမ့်တိုက်နေတော့တာပဲ။
ရေနွေးကြမ်းကိုကြိုက်လဲကြိုက်တယ် သောက်လဲသောက်ချင်ပါတယ်… ဒါပေမဲ့…
အိမ်နားက လက်ဘက်ခြောက်ထုတ်တဲ့ကောင်မလေး အလုပ်သိမ်းချိန်ပြန်လာတော့ လက်မှာလဲ ဆေးဆိုးထားသလို ညိုမဲလို့…
မေးကြည့်လိုက်တော့ လက်ဘက်ခြောက်ဆေးဆိုးတွေလေ အမရဲ့တဲ့… ကိုင်ကိုင်ချင်းတော့ ဘာမှာမဖြစ်ဘူး တစ်နေ့လုံးကိုင်ရတာ ဆိုတော့ ကြာတော့ လက်မှာဆိုးဆေးတွေစွဲနေတာတဲ့…
ကဲ အဲဒီ့လက်ဘက်ခြောက်သောက်မိရင်ကော အဆီကျမလား… ဖြေ… :bar:
ခု ပို့(စ) ကို ရေနွေးကြမ်း သောက်ရင်း ဖတ်သွားပါသည်…
ဘီယာဗိုက်တွေရော ကျပါသလားခည ???
ရေနွေးကြမ်းသောက်ရတာ သဘောကျပါတယ် အန်ကယ်ရေ ။
အခုလို အဆီကျတယ်ဆိုတာလည်း သိရတော့.. ဟီး .. နောက်ဆို ရေလုံးဝမသောက်တော့ဘူး ၊ ရေနွေးကြမ်းချည်းပဲ သောက်တော့မယ် ..
ရုံးမှာဆို နွေခေါင်ခေါင်တောင် ချမ်းစိမ့်နေတာပဲ … လူကချွေးသိပ်မထွက်တော့ ၊ နေလို့ ထိုင်လို့က မကောင်းချင်ဘူးလေ ။ ဒါနဲ့ ပဲ … ရေနွေးကြက်သီးနွေးလောက် အနေထားကို … လှိမ့်ပြီးသောက်နေတာ …. အတော်နေလို့ ကောင်းတယ် …. ။ stress များနေတဲ့အချိန် ဘာမှ မတွေးပဲ ရေနွေးခွက်ထဲ မျက်နှာကပ်ပြီးသောက်ကြည့် ….. လန်းဆန်းသလိုတောင် ခံစားရတယ် … ဟီး ။ :harr:
ဘဲဥရေ တယ်ဟုတ်တဲ့စာဆိုပါလားနော် လူ့ကျက်သရေ ဗိုက်မှာနေတဲ့ ။
လက်မနှေးဝယ်သာပေးပေတော့ Onyx ရေ။
လဖက်ခြောက်မှိုမတက်စေချင်ရန် တစ်ချို့ပြန်လှော်ကြသလို၊ လေလုံတဲ့ဗူးနဲ့ထဲလည်း ရပါသည်ဟုသိရ ကြောင်း မဟာရာဇာ အံစာတုံးရေ။
အဆီတက်တာတော့ သက်သာလောက်မယ်လို့ယူဆပါကြောင်း Shwe Tike Soe ရေ။ ပိန်ဖို့အတွက်တော့ လေ့ကျင်ခန်းတို့ အနည်းဆုံး လက်လျှောက်တာတို့တော့ လုပ်ရမပေါ့။
ဆူးရေဟုတ်လောက်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်အဘလည်းရေနွေးကြမ်းဘဲအမြဲသောက်တာ ၉၈ နှစ်ထိ သွေးထဲအဆီမရှိ နေခဲ့ရတာဘဲလေ။
ဆေးဆိုးလဖက်ခြောက်ကြောက်ရင် ဈေးတော့နည်းနည်းကြီးပေမယ့် စိတ်ချရတဲ့ Organic Green Tea တွေခုခေတ်မှာရနေပါပြီ သီရိမဟာ ဥမ္မာဒန္ဒီ ပပ၀တီ ဦးဗြဲရမ်း ဒေါ်ဗလဗွ သမီး
ညောင်ရမ်းဂွတို Wow ရေ။( ဘေးကရေနွေးကြမ်းတခွက်မော့လိုက်ရပါကြောင်း အမည်ခေါ်လိုက်ရလို့)
ခု ပို့(စ) ကို ရေနွေးကြမ်း သောက်ရင်း ဖတ်သွားတဲ့ မခိုင်ဇာဝင်းရေ ကျေးဇူးနော်။
ဘီယာက ရေနွေးကြမ်းသောက်တဲ့ ပမာဏထက် သာလွန်များလောက်ရင်တော့ ဘယ်လိုလုပ်ကျမလဲ
သီ ဟ သူ ရ ချာ လ တာ အာ ပေ တူး ရေ၊ စဉ်းစားကြည့်ပါအုံး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်… ရေနွေးကြမ်း(လက်ဖက်ရည်ကြမ်း) သောက်တာကောင်းတယ်ထင်ပါကြောင်း..
Green Tea increases your metabolism making you burn more fat and it’samild appetite suppressant that makes you eat less so weight loss becomesanatural
process with green tea.
Green Tea isadiuretic that removes excess water weight from your body that makes you look bloated.
Dr. Nicholas Perricone told Oprah Winfrey she could lose 10 lbs. in 4-to-6 weeks drinking green tea instead of coffee.
The catechins in Green Tea forces your body into thermogenesis – this is where your body burns fat for energy.
Green Tea causes carbohydrates to be released slowly, preventing rises in blood-insulin levels and this causes your body to burn fat.
Green Tea prevents you from gaining weight by stopping the movement of sugar into your fat cells. Evidence shows that drinking green tea is related to reductions in body fat.
The International Journal of Obesity states that Green Tea contains polyphenols which causes your body to produce heat that burns off your body fat.
The University of Chicago’s Tang Center for Herbal Medical Research shows Green Tea reduces the fat deposits under your skin and the fat in your belly area.
Studies show that when you drink Green Tea every day for3months you’ll lose more body fat than those who drink regular tea.
Lots of Green Tea weight loss studies prove green tea lowers blood sugar. A lower blood sugar reduces your cravings making you not eat as much so you won’t gain any weight.
Several studies on obesity have concluded that people who’ve been drinking Green Tea for more than 10 years showed lower body fat percentages compared with those who don’t drink green tea regularly. That’saproven fact!
မသောက်ပေမယ့် ကိုခင်ခပြောသလို ဗိုက်အတွက် Twister လှည့်တယ်…
ပြီးရင် ၀ိတ်မတယ်…တစ်နေ့ ၁၅ မိနစ်ကနေ မိနစ် ၃၀ လမ်းလျှောက်တယ်..
၀ိတ်ကတော့ ရယ်မလားမသိဘူး…၁ပေါင်တုံးပဲ လက်မောင်းကျစ်ရုံပဲမတာ..
လက်မောင်းကြီး ကြီးတက်လာပြီး ၀ိတ်ပေါဖြစ်သွားမလားလို့ ရမ်းထင်နေတာ..
အဆိုတော်ကြီး နွဲ့ယဉ်ဝင်းဆို ၅ပေါင်တုံးမတာ…ဒါပေမယ့် သူ့လက်မောင်းက
ဖြစ်နိုင်တယ်ကိုခင်ခရေ မနိုလည်းရေနွေးကြမ်းကို တစ်နေ၃ခွက်လောက်သောက်တယ်
ရှမ်း/ပလောင် စတဲ့ အသိတွေရှိတော့ လက်ဖက်ခြောက် စစ်စစ်လေးသောက်ရပါတယ်
ဒီမှာဒီအတိုင်းဝယ်ရရင်တော့ လက်ဖက်ခြောက်ကို လှော်လိုက်ပါတယ်
လှော်ပြီးသောက်တဲ့ ရေနွေးကြမ်းက လေမအောင့်စေပါဘူး
ရေနွေးကြမ်းဦးရေကို မသောက်ပါနဲ့ (ဆိုလိုတာက)
တစ်မိနှစ်လောက်ခဏထားပြီးရင် အပေါ်မှာ အမှုန်လေးတက်လာလိမ့်မယ်
ကျုပ်ကတော့ ရေနွေးကြမ်းအလွန်ကြိုက်တဲ့သူမို့ (ဒါကြောင့် အဆုတ်ကင်ဆာမဖြစ်သေးတာ)
မည်သည့်လဘက်ခြောက်မဆို ရေနွေးပူပူမှာခပ်ရင် သုံးမိနစ်အတွင်းအရောင် နီမလာပါဘူး..
သုံးမိနစ်မပြည့်ခင် အရောင်နီလာရင် အဲဒါဆေးဆိုးထားတာဖြစ်ဖို့များပါကြောင်း…
မယုံရတဲ့ လဘက်ရည်ဆိုင်က ရေနွေးကြမ်းတွေကိုလဲ သိပ်မသောက်သင့်ပါကြောင်း…
( ဗိုက်အဆီတွေကို အမြန်ဆုံး ဖယ်ရှား ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ရေနွေးကြမ်း တနေ့ ၃ခွက်အပြင်
ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလေးပါ အပိုဆောင်းပြီ လုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ )
”ဆေးလည်းအစာ အစာလည်းဆေး” ဆိုလား
အထူးပြောခြင်တာက ဝတယ်ဆိုတာ အဆီတွေကြောင့်လို့ ပြောလို့ရတာပေါ့နော
အများအားဖြင့်တော့ ဝ တဲ့သူတွေဟာ ဝါးတီးပေးတဲ့နေရာမှာ အားသန်ကြတယ်ပြောလို့ရမလားဘဲ
ယနေ့ ဝ တယ်ဆိုတဲ့လူတွေ စိတ်အဝင်စားဆုံးကတော့ အထူးသဖြင့် ရေလာတဲ့သူတွေပေါ့
ဇိမ်လေးနဲ့ ပုံမှန်မှီဝဲနေယုံနဲ့ အဆီကျဆေး မဝဆေး တွေပါ
ရေနွေးကြမ်းကို သောက်သုံးရင်ပိန်စေတယ် အစီကျစေနိုင်တယ် အဲ့သည်လို ဆေးဝါးတွေကိုပါ။
ဆိုလိုတာက နေခြင်သလိုနေမယ် စားခြင်သလိုစားမယ် ပြီးရင် ဆေးဆိုတဲ့ ဆေးကိုမှီဝဲလိုက်ရင်
မဝဘူး အဆီကျမယ် ဒီလိုသဘောတွေကို ကြိုက်ကြတယ်
ဆိုခဲ့ပြီးသလို ဆေးဆိုတာကလည်း ဆေးပါဘဲ
ဆေးဝါးတွေအပြင် ကျမ္မာရေးဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ခပ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေးလုပ်ကြည့်
ဆေးထက်ကို ပိုပြီး အကျိုးသက်ရောက်စေပါတယ်
ဒီလိုဆိုလိုက်လို့ ဆေးဆိုတာ အလကားပါလို့ဆိုလိုလိုက်တာဟုတ်ဘူးနော
ဝလွန်းတဲ့သူတွေ အဆီပိတ်လွန်းတဲ့သူတွေ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ပြီး
ဆေးဝါးမှီဝဲလို့ ဝလွန်းသူတွေ အဆီပိတ်လွန်းသူတွေ ပုံမှန်ဘော်ဒီပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ
မကြားဖူးပါဘူး ( ဒါကတော့ ကျုပ်မကြားဖူးလို့ပါ )
သတိထားတတ်ရင်တွေ့မှာပါ ဝတဲ့သူတွေ အဆီပိတ်တဲ့သူတွေဟာ ခန္ဓာလှုပ်ရှားတာနဲ့
လွယ်လွယ်မောတတ်ကြပါတယ် မောတဲ့အခါ စိတ်လျှော့ပြီး လှုပ်ရှားမှု့သိပ်မလုပ်ကြဘဲ
ဝါးတီးကိုဘဲ ဆင်ခြေဆင်လက်တွေနဲ့ အပီဆွဲဂျဘာဒယ်
ပြောရရင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း အောလပုံပေါ့ဗျာ
အထူးတိုက်တွန်းခြင်တာက ဝတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ဇွဲလုံလတွေနဲ့
ဆေးဝါးတွေလည်းမှီဝဲပါ လေ့ကျင့်ခန်းတွေလည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်ကြပါ
ဆက်ပြောရရင်လည်း လေကရှည်နေဦးမယ် ဒါ့ကြောင့်မပြောဂျင်ဒါ
တိုးတက်တဲ့ မြို့ပြလူနေမှု့စနစ်တွေမှာတော့ ပိုက်ဆံပေးပြီး ကျမ္မာရေးလုပ်လို့ရတဲ့
ဘာလို့ခေါ်သဒုံး အိမ်လား ဆိုင်လား အဲ့သည်လိုနေရာတွေရှိတယ်
ကျုပ်တွေ့ဘူးတာဆို အဲ့သည်အိမ်လား ဘာလား ဆိုတာကြီးကို မှန်တွေကာထားတာ
ကောင်မလေးတွေ အားကစားဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ အားကစားနေကြတာကလည်း
အပြင်ကနေမြင်နေရတော့ ကြည့်လို့ကောင်းတယ်လို့ပြောရင် နှာဘူးလို့ပြောနမှာဆိုးလို့
အလကားဒဗျားမှ မကုန်ဘဲ ကျမ္မာရေးလုပ်လို့ရတဲ့ ပြည်သူ့ပန်းခြံထဲက ထိုင်ခုံတစ်ခုကနေ
သူငယ်မလေးတွေ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေကြတာကိုဘဲ မှိတ်မသုန်ကြည့်ပြီး
ငယ်ငယ်လည်း ဒါဘာဘဲ လို့
ကျီးကျီးငယ်ငယ် ဒါဘာဘဲ လို့ သံဝေဂယူရသပေါ့ဗျာ
candle ကတော့ ရေနွေးကြမ်းကို အချိန်ပြည့် ပူပူ၊ နွေးနွေး၊ အေးအေး ကြိုက်လို့ ကို သောက်ဖြစ်တာပါ..
ရေစိမ်း ကိုလုံးဝ မသောက်ပါဘူး..တစ်ခါတစ်လေ ရေစိမ်း လုံးဝမသောက်လို့ ပြသနာ များရှိလေမလား
လေ့ကျင့်ခန်းရယ်လို့ သီးသန့် တော့မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး..
နေ့ စဉ် candle အလုပ်ရဲ့ လမ်းလျှောက်ရတာတွေ မိုင်နဲ့ တွက်ကြည့်ရင် အနည်းဆုံးတော့ သုံးမိုင် ဘဲ..
့ပဲများပြီး ပန်ဆယ်လ်ဟီးလ် လေးစီးထားမိတဲ့နေ့ ဆိုရင်တော့ production site ကနေ ကိုယ့် ရုံးခန်းလေး
ထဲပြန်ရောက်တာနဲ့ ချက်ချင်း ဖိနပ်ကိုချွတ်မိတော့တာဘဲ..လမ်းလျောက်ရလွန်းလို့ ပါ..
ဒါပေမဲ့..အရပ် ငါးပေသုံး မှာ ပေါင်ချိန်က ခြောက်ဆယ့်ရှစ် ဘယ်တော့မှမကျ..( အ..ဟင့်..ချိတ်နာ ဒယ် )
ဝိတ်ကျချင်တဲ့အထဲမှာ candle လဲအပါအဝင်မို့ ရေနွေးကြမ်းရဲ့အပူ အနွေး ဘယ်လိုအနေအထားက
အကောင်းဆုံး နဲ့ သင့်တော်ရာ လက်ဖက်ခြောက်လေးများလည်း သိသူများက ညွှန်းပေးပါအုံးနော်..
ပေါင်ချိန်က ( ကီလို 68 တောင်လို့ ပြောချင်တာပါ )
မနို ပြောသလို လက်ဖက်ခြောက် ထဲ ကို ထည့်တဲ့ ပထမဦးရေကို သွန်ပြီးမှ သောက် လို့ ပြောတာ ကြားဖူးတယ်။
သဲ၊ ဖုန် တွေ စင်အောင်လားတော့ မသိ။
ကျွန်မလဲ ရေနွေးကြမ်းတော့ ကြိုက်ပါရဲ့။
ဒါပေမဲ့ ရိုးရိုးရေ ကိုပိုသောက်ဖြစ်တာများတယ်။
ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတလေးများ အတွက် ကျေးကျေးပါရှင်။
ညဘက် ဘီအီးတွေသောက်ပြီး မနက်ဖက် ရေနွေးကြမ်းတွေသောက်လို့ကျုပ်ဗိုက်က မပူတာကိုးဗျ
ဒီလိုလျှို့ ဝှက်ချက်လေးတွေလဲ စိသကိုးဗျာ..
ကြိုက်သလောက်သောက် သောက်သလောက်မပူတဲ့ ဆရာခရဲ့ ဗိုက်ပူဗိုက်ချပ်နည်းလေး.မိုက်သဗျာ..
ရေနွေးတစ်ခွက်သောက်လိုက် ၀ါးတီး တစ်ဇလုံစွဲလိုက်ဆိုရင်တော့ ဗိုက်ကြီးသည်ကြီးဖြစ်လာမယ်ထင်တယ်
ဒီကနေ့ ကစပြီး ဘီယာဗိုက်ကလေး ကို ရေနွေးကြမ်းနဲ့ စမ်းကြည့်ရဦးမယ်
ကိုအောင်ပု ပြောတဲ့ နည်းလဲ မဆိုးဘူးမို့ ၊ ပန်းခြံထဲ သွား ရေနွေးကြမ်းထိုင်သောက်ရမယ့် ၊ ခွချက် တစ်ကွက် ရတဲ့ပို့ စ်ပဲဗျို့ 
ရေနွေးကြမ်းလည်း ကြိုက်တယ် . သောက်လည်း သောက်ဖြစ်တယ် ။ရေလည်း သောက်တယ် ။
တစ်နေ့ နာရီဝက်လောက်လဲ ပုံမှန်နီးနီး လမ်းလျှောက်ဖြစ်တယ် ။ ၀ိတ်ကတော့ တက်လိုက်ကျလိုက် ။ ဒါပေမဲ့ ။။ ဒါပေမဲ့ …ဗိုက်ကတော့ မပြောင်းလဲဘူး … ဆိုတော့ ကိုယ်တွေ့ အရတော့ မမှန်ဘူး ။ မျိုးရိုးကြောင့်လားတော့ မသိ ။ :eee:
My colleague shares me his Chinese green tea from Northern China . I feel my gut I am fit and losing belly inamonth.
The tea has very good aroma and very natural taste. Onlyathing I have to tell,it costs USD 200 / kg.
If you really want it, don’t follow the cheap stuff.
နို့ဆီ သကြားနဲ့ ဖျော်တဲ့ လဖက်ရည် သောက်ရင် အတူတူပဲလား။ မတူလည်း တူလိုက်ပါဗျာ၊ ကော်ဖီမကြိုက်လို့…
ရေနွေးကြမ်းက ၀မ်းမချုပ်ဘူးလားဟင်.. တူမကတော့ နဂိုကမှ အထိုင်များလို့ ရောဂါထူရတဲ့ကြားထဲ ရေနွေးကြမ်းထပ်သောက်ရင် ပိုဆိုးမလားဆိုပြီး မသောက်ဖြစ်ဘူး… သောက်လို့ရမလား မရလား ပြောပေးနော်… တူမလည်းအဆီကျချင်လို့… ဒီတူမ အစားသောင်းကျန်းတာ သိတယ်ဟုတ်…
ရေနွေးကြမ်းသောက်လို့ ၀မ်းချုပ်စေတယ်ဆိုတာ လဖက်ခြောက်များများနဲ့ အခါးသောက်မှပါ၊
လဖက်ခြောက်က လဖက်ဘဲလေ လဖက်သုတ်စားတိုင်းရော ၀မ်းချုပ်စေလို့လား၊ သင့်တော်ရုံ
သောက်ကောင်းရုံလောက် လဖက်ခြောက်ခပ်ပြီးသောက်ရင် ဘာမှမဖြစ်နိုင်သလို ၀မ်းချုပ်စေတယ်
ဆိုတာ အခြားစားတဲ့အစာတွေနဲ့လည်း သက်ဆိုင်ပါတယ် အသီးအရွက်များများစားတတ်သူက
ရေနွေးကြမ်းသောက်ဘယ်လိုဘဲသောက်ပါစေ ၀မ်းမချုပ်ဘူး၊ အဲ အသီးအနှံအစားနည်းမယ်
အသားအစားများမယ် ကောက်ညင်းပါတဲ့အစာမျိုးပိုစားနေရင်တော့ ရေနွေးကြမ်းမဟုတ်ဘူး
ရေသောက်ပေမည့်လည်း ၀မ်ချုပ်နိုင်ပါတယ် သမီးမွန်မွန်ရေ။ ကျွန်တော်ဆို ရုံးချိန်တလျှောက်လုံးရေနွေး
အခုပဲ လက်ဖက်ရည်သွားထည့်လိုက်တော့မယ်…. လက်ဖက်ခြောက်နည်းနည်းနဲ့ရေနွေးကြမ်း..
အိမ်မှာတော့ အစ်ကိုက နေ့တိုင်း ရေနွေးကြမ်းသောက်တယ် ၁ နှစ်လောက်ရှိပြီ … ပိန်လည်းမပိန်လာသေးဘူး …